6 နည်းလမ်းများ ITIL Foundation ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ် Get မှ - Gurgaon အတွက် ITIL သင်တန်း
Gurgaon အတွက် ITIL Foundation ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ် Get လုပ်နည်း
ITIL သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအခြေခံအဆောက်အအုံစာကြည့်တိုက်တစ်ခုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူလကစံချိန်စံညွှန်းများအစုတခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဗဟိုကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအေဂျင်စီ (CCTA) အားဖြင့် 1980s အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ OGC - ဧပြီလ 2001 ခုနှစ်, CCTA ဗြိတိန်ဘဏ္ဍာရေးရုံးခန်းသို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။
ITIL များအတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အစုတခုဖြစ်ပါသည် အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု High-end သေးတတ်နိုင်အိုင်တီန်ဆောင်မှုများ၏ထိရောက်သောပံ့ပိုးကူညီမှု & ပေးပို့များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကူညီပေးသည်ရာ (ITSM) ။ အဆိုပါ ITIL Foundation မှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်တန်း ITSM များအတွက်လိုအပ်သည့်သော့ချက်အယူအဆ, အခြေခံမူ, လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုလက်တွေ့ကျတဲ့အသိပညာပေးသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုအောင်မြင်စွာဘို့ပေါ်လာဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြင်ဆင် ITIL Foundation က လက်မှတ်စာမေးပွဲတွင်။
အဆိုပါ ITIL Foundation ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်တန်းကိုငါး module တွေအော 26 ITIL လုပ်ငန်းစဉ်များဖုံးလွှမ်း:
ITIL အောင်လက်မှတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ကြီးထွားဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအစွမ်းထက် tool အဖြစ်အိုင်တီသုံးပြီးအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှု validates ။
ဤတွင်ကျောင်းသား ITIL အောင်လက်မှတ်ဝင်ငွေမှဖတ်နိုင်သောသူအချို့ကောင်းသောစာအုပ်များစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု: ITIL Foundation မှစာမေးပွဲလျှောက်ထားမှုအတွက်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်
BCS ထုတ်ဝေသည်နှင့် R.Griffiths အားဖြင့်ရေးသား, အီး Brewster, အေ Lawes နှင့်ဂျေ Sansbury ဤစာအုပ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုရှင်းလင်းဖို့ရည်မှန်းနေသောသူများအဘို့ကြီးစွာသောသင်ယူမှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာအဆင့်နှင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့ပေါ်လာဖို့သူတို့ရဲ့စေတနာအကဲဖြတ်အတွက်ကျောင်းသားများကိုကူညီပေးသည်အဖြစ်လေ့လာမှုလမ်းညွှန်ကဖုန်းဆက်ဖို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီအလေးကဏ္ဍများကိုဖွပထမဦးဆုံးအပိုင်းဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါသည်သို့ခွဲခြားသောတစ်ဦးကိုတရားဝင်လိုင်စင်ရကုန်ပစ္စည်းရှိ၏ ဒုတိယအပိုင်းတတိယအပိုင်း ITIL ဖြစ်စဉ်များ & လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်, ထို ITIL ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသော module တွေဖုံးလွှမ်း; စတုတ္ထအပိုင်းအားလုံးတိုင်းတာ & မက်ထရစ်အကြောင်းပါ။
ITIL ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းထုတ်ဝေမှု Suite
OGC ကကမ်းလှမ်းဤစာအုပ်ငါးအဆင့်ငါး ITIL အခြေခံအုတ်မြစ်ကဏ္ဍများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာန်ဆောင်မှုနည်းဗျူဟာနှင့်အတူစတင်အစဉ်အမြဲဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်မှုဇာတ်စင်ပေါ်တွင်လှုံ့ဆော်ပေးနှင့်အကြားအပေါငျးတို့သညျအခွား module တွေဖုံးလွှမ်း။
အဆိုပါ suite ကိုအတွက်ငါးစာအုပ်တွေ ခွဲခြား. မရဘဲချိတ်ဆက်နေကြသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်ယခင်အဆင့်အထိချိတ်ဆက်နေသည်။ အားလုံးတစ်ဦးအလေ့အကျင့်အဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးပါ။ အဆိုပါ ITIL လူနေမှုပုံစံစတဲ့ထုတ်ဝေမှု Suite ကိုလည်း PDF အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ITIL Foundation မှ 2011 စာမေးပွဲကိုးကားစရာစာအုပ်
ဟယ်လင်မောရစ်နှင့် Liz Gallacher - ဤရည်ညွှန်းစာအုပ်အများဆုံးလေးစားဖွယ် ITIL သင်တန်းဆရာနှစ်ယောက်တို့ဖွငျ့ရေးသားထားသည်။ ဒါဟာနားလည်ရန်ကအတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်စေသည်နည်းလမ်းတွေထဲကအရိုးရှင်းဆုံးအတွက် ITIL ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း module တွေ elucidates ။ ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လေ့လာခွင့်ပြုထားတဲ့ဂရပ်ဖစ်, ဇယားများနှင့်သရုပ်ဖော်ပုံများတစ်ရက်ရက်ရောရောသုံးစွဲခြင်းလည်းမရှိ။ အဆိုပါအကြောင်းအရာဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော် sequence ကို၌တည်ရှိ၏နှင့်နားလည်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်တစ်ဦးချင်းစီအခနျးကွီးရဲ့အဆုံးမှာအစစ်အမှန်ဘဝနမူနာ & မေးခွန်းများကိုနှင့်အတူအသေးစိတ်ရှင်းလင်းထားသည်။
ITIL Foundation မှ Essentials: သင်လိုအပ်အဆိုပါစာမေးပွဲအချက်အလက်
တစ်ဝါရင့် ITIL ကျောင်းအုပ်ကြီးကထိက, ကို Claire Agutter အားဖြင့်ရေးသား, ဤစာအုပ်ကိုသင်ယူမှုများအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးအံ့သြစရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ITIL Foundation မှ Essentials ရိုးရှင်းပြီးနားလည်ရန်လွယ်ကူသော, ဖြောင့်မှ-The-အချက်ကြောင်းတစ်ခုစနစ်တကျထုံးစံ၌ ITIL ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ:နမူနာမေးခွန်းနှင့် ITIL စာမေးပွဲများအတွက်အဖြေများ 2017
ITIL V3 ဖောင်ဒေးရှင်းမှလမ်းညွှန်
ITIL V3 ဖောင်ဒေးရှင်းမှလမ်းညွှန် Taruu, Indiana ပြည်နယ်ကနေတစ်ခုအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီတခုအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အခမဲ့ eBook ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IITL အခြေခံအုတ်မြစ်သင်တန်းသားအပေါငျးသဘောတရားများကိုဖုံးအုပ်နေတဲ့ 45-စာမျက်နှာနေရာလေးကိုအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ infographics ၎င်း၏သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုကိုကအကြီးအဖတ်စေသည်။ ဒါဟာစုံစုံဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်ထုံးစံ၌သင်တန်းအခြေခံလိုအပ်ချက်များရှင်းပြသည်။ ဒါဟာအစအရင်ကဆိုရင်အဘို့နှင့်နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသိပညာပြုပြင်လိုသောလိုသူများအတွက်မိတ်ဆက်စာအုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ ITIL Foundation မှစာမေးပွဲဖြတ်သန်း - 2011 Edition ကို
ဤစာအုပ် ITIL အခြေခံအုတ်မြစ်လက်မှတ်လိုက်ရှာကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးစံပြအဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ITIL Foundation မှစာမေးပွဲဖြတ်သန်း ITIL (TSO များက IE) ၏တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကထုတ်ဝေပြီး ITIL တရားဝင်လေ့ကျင့်ရေးလမ်းညွှန်ဟာ ITIL သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံပြည့်စုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးသည် Accreditor.This အားဖြင့်ထောက်ခံသည်။ ဒါဟာဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်မသာအခန်းကြီးဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်ငါးဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းအဆင့်တစ်ခုချင်းစီပေမယ့်စာမေးပွဲဖြေဆိုကိုယ်တိုင်ကအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပေးပါသည်။
ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ:ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
စာအုပ်အထက်ပါစာရင်းဝေးကုန်ခမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အသိပညာတိုးတက်စေရန်နှင့် ITIL သင်တန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ကျောင်းသားမရရှိနိုင်များစွာသောအခြားအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်။
# ITIL အခြေခံအုတ်မြစ် traininng
# ITIL အခြေခံအုတ်မြစ်လက်မှတ်
Gurgaon အတွက် # ITIL လေ့ကျင့်ရေး
Gurgaon အတွက် # ITIL အောင်လက်မှတ်